Gabay khaliif sh maxamuud tolla&#39...
Monday, June 1, 2020 - 22:38
Gabay jiib macaan looqaadayo oo cwxo...
Ganda pilipina daw (patnubay at gabay...
Monday, June 1, 2020 - 21:51
Q. 3aad sheekadii NIMAA II WARAMAY iyo...
Sheikh mustafa maxaan ka dhaxalnay...
Monday, June 1, 2020 - 18:37
Maandeeq || Gabay murti iyo miisaan leh...
Monday, June 1, 2020 - 16:33
Gabay cajiiba daaci hargaysa
Abwaan heelo oo gabay ka tariyay...
Siyaaradii Sh.Xasan Qoryoley muxadaro...
Mga Paalala at Gabay Ngayong Enrollment...
Gabay sa Pag- eenrol mula sa CID
GABAY LAGU DIFAACAYO CULIMADA
Gabay kusaabsan Soomaalida qurubaha ku...
Gabay wacdi ah -Abwaan jaamac kadiye
Tanging Gabay cover by Bro Jomari
Mbappé oo si xiiso leh kaga hadlay...
Saturday, May 30, 2020 - 06:43
(Paris) 30 Maajo 2020. Xiddiga kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé ayaa si xiiso leh kaga hadlay suurtagalnimada uu ugu guuleysan karo abaal-marinta Ballon d’Or, kaddib markii uu liiska tartamayaasha abaal-marintan kaga dhameystay kaalinta afaraad sanadkii hore.
Haddaba Kylian Mbappé ayaa wareysi uu bixiyay dhawaan wuxuu kaga hadlay suurtogalnimada uu ugu guuleysan karo abaal-marinta Ballon d’Or, wuxuuna yiri:
“Way fiicnaan laheyd in lagu guuleysto, laakiin maahan wax iga dhigaya in habeenkii aan ka tooso hurdada”.
“Uma maleynayo inaan ku guuleysan doono sanadka soo socda ama kan ku xiga, ma jiro waqti cayiman oo aan ku guuleysto”.
“Waxaan marwalba gelin doonaa kooxdeyda iyo wadankeyga meesha ugu horeysa, markaas kaddib haddii aan ku guuleysto abaal-marinta shaqsiga ah, waxay noqon doontaa wax dheeri ah”.
“Hamigeyga xiga waa inaan bandhig fiican ka sameeyo xulkeyga qaranka ee France sanadka soo socda koobka qaramada yurub…Hamigeyga ugu weynna waa inaan ku guuleysto Champions League… Waxaan doonayaa in horyaalka Ligue 1 aan kula guuleysto kooxda Paris Saint-Germain, inaan kula guuleysto Champions League markii ugu horeysay taariikhda kooxda waxa ay noqon doontaa wax aad u khaas ah”.
Intaas kaddib Kylian Mbappé ayaa wuxuu ka hadlay xiddiga uu kaga daydo kubadda cagta wuxuuna yiri:
“Bilowgii wuxuu ahaa Zidane, kaddib wax walba uu kula guuleystay xulka qaranka France, kaddib Cristiano Ronaldo oo guulo badan gaaray, haddana wuxuu wali sii wadaa inuu guuleysto, kaddib guulahan oo dhan uu gaaray, waxay sumcadooda kaga tageen Taariikhda kubada cagta”.Gool FM.
Pep Guardiola oo qorsheynaya in shaqsi...
Si kastaba ha noqotee, Pep Guardiola ayaa doonaya inuu keensado kaaliye cusub ka hor bilowga xilli ciyaareedka soo socda, lamana filayo in Kompany uu imaan doono, sababa la xiriira inuu doonayo inuu guulo la gaaro kooxda reer Belgium ee Anderlecht.Gool FM.
Chelsea oo qorsheeneysa in heshiiska...
Friday, May 29, 2020 - 18:12
24-jirkan ayaa u ciyaaray 40 kulan tan iyo markii uu bilaabay tan iyo bilawga xilli ciyaareedkan kooxdiisa RB Leipzig, wuxuu ku guuleystay inuu dhaliyo 31 gool, wuxuuna qandaraaska uu hadda ku joogo kooxda reer Germany uu dhacayaa June 2023.Gool FM.
Tababare Mikel Arteta oo xiiseynaya...
Friday, May 29, 2020 - 14:08
(London) 29 Maajo 2020. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa qeyb ka noqotay raacdada loogu jiro mid ka mid ah xiddigaha Barcelona, inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo socda.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa xaqiijiyay in Tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta uu xiiseynayo inuu lasoo saxiixdo laacibka qadka dhexe reer Brazil ee Rafinha Alcântara.
Sida laga soo xigtay wargayska“Mundo Deportivo” Rafinha Alcântara oo 27 jir ah ayaa qiimaha lagu iibsan karo waxaa lagu qiyaasay 13 million pounds.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan haddii ay dhacdo in Rafinha Alcântara uu yimaado kooxda Arsenal, waxay Gunners ka bixi doontaa fikrada ay ku dooneyso inay si toos ah ula wareegto Dani Ceballos, kaasoo amaah ahaan kaga soo dhaqaaqay ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedkan naadiga Real Madrid.
Si kastaba ha noqotee, laacibka qadka dhexe reer Brazil ee Rafinha Alcântara ayaa wuxuu xilli ciyaareedkan qaab amaah ahaan ku joogaa kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo.Gool FM.
RASMI: Xilliga dib loo ciyaari doono...
“Waxaan ku faraxsanahay inaan ogolaano taariikhaha cusub ee kulamada FA Cup, madaama tartanku uu yahay qeyb muhiim u ah kalandarka kubbadda cagta Ingiriiska muddo ku dhow 150 sano”.Haddaba dhanka hoose kaga boggo isku aadka wareega siddeed dhamaadka ee koobka FA Cup:
Norwich City vs Manchester United.Gool FM.
Sandro Rosell oo shaaca ka qaaday...
Friday, May 29, 2020 - 10:58
(Barcelona) 29 Maajo 2020. Madaxweynihii hore kooxda Barcelona ee Sandro Rosell ayaa ra’yigiisa ka dhiibtay istiraatiijiyadda ay tahay in Barca ay raacdo si ay u helaan adeega xiddiga reer Argentina iyo naadiga Inter Milan ee Lautaro Martínez.
Magaca Lautaro Martínez oo 22 jir ah ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo kooxda Barcelona, laga bilaabo xilli ciyaareedka cusub ee soo socda.
Lautaro Martínez ayaa noqday bar-tilmaameedka koowaad suuqa xagaaga ee Barcelona, iyadoo ay maamulka kooxda aaminsan yihiin inuu noqon doono badelka saxda ah ee Luis Suárez sanadaha soo socda.
Haddaba Madaxweynihii hore kooxda Barcelona ee Sandro Rosell oo wareysi dhinacyo badan taabanaya ku bixiyay “Radio Marca” ayaa wuxuu yiri:
“Ma bixin doono 111 million euros, oo ah qiimaha lagu kansali karo qandaraaska Lautaro Martínez ee kooxda Inter Milan, si kaliya aan ula soo saxiixdo”.
“Laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan ciyaartoy qeyb kaga soo dhigo heshiiska si aan u yareeyo qiimaha lacagta”. ayuu Sandro Rosell u sheegay Radio Marca.Gool FM.
“Ciyaarista la’aanta taageerayaasha...
“Haddii aad tufto candhuuf, waxaad qaadan kartaa kaar jaale ah, waxaan ku aragnay horyaalka Bundesliga Jarmalka, midba midka kale ma salaamo, ilaa ay si dhib leh u dabaaldegaan”.Gool FM.
Real Madrid oo soo bandhigtay magacyada...
Friday, May 29, 2020 - 09:21
(Madrid) 29 Maajo 2020. Sida ay shaaca ka qaadeen wargeysyada waxaa la soo sheegayaa horumar cusub oo ku saabsan wadahadalada u dhexeeya Real Madrid iyo dhiggeeda Manchester United, si uu ugu dhaqaaqo Paul Pogba garoonka Santiago Bernabéu inta lagu jiro xilliga kala iibsiga ee xagaaga.
Pogba ayaa sheegay inuu doonayo inuu ka tago Manchester United, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in Juventus iyo Real Madrid ee xiiseynaya inay la saxiixdaan.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Real Madrid ay miiska u soo saari karto ilaa iyo afar ciyaaryahan, si ay u hesho kaliya adeega Pogba.
Wargeyska ayaa wuxuu hadalkiisa intaas ku sii daray in afarta ciyaaryahan ee miiska la soo saari karo ay kala yihiin Martin Ødegaard, James Rodríguez, Brahim Díaz iyo Lucas Vázquez.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in Zidane uu wali doonayo Pogba, isla markaana Real Madrid ay isku dayi doonto inay qandaraas la gasho, iyadoo soo bandhigeysa magacyada afar ciyaaryahan, si ay Man United ugu ogolaato laacibka reer France inuu u dhaqaaqo Los Blancos.Gool FM.
“Liverpool waxay u qalantaa in loo...
Friday, May 29, 2020 - 08:51
(England) 29 Maajo 2020. Halyeeyga Manchester United ee Ryan Giggs ayaa ammaanay qaab ciyaareedka ay soo bandhigeyso kooxda ay ku xilfaltamaan United-ka horyaalka Premier League ee Liverpool.
Macalinka xulka qaranka Weles ee Ryan Giggs ayaa dhinaca kale carabka ku adkeeyay in Liverpool ay u qalanto in loo caleemo saaro horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Wargeyska “Daily Star” ee dalka England ayaa qoray hadalada Ryan Giggs kaddib wareysi uu bixiyay dhawaantan, wuxuuna yiri:
“Liverpool waa koox weyn sanadkan, taasoo hoos timaada macalin weyn waana Jürgen Klopp”.
“Waa wax xanuun badan inaan sidaas sheego ka taageero ahaan kooxda Manchester United laakiin Liverpool xilli ciyaareedkan aad ayey u fiicneyd”.
“Si kasta oo ay noqoto, way ku guuleysan doonaan Premier League waana u qalmaan”.Gool FM.
“Lionel Messi waa ciyaaryahanka kaliya...
(Barcelona) 29 Maajo 2020. Madaxweynihii hore kooxda kubadda cagta Barcelona ee Sandro Rosell ayaa sheegay in Lionel Messi uu yahay laacibka kaliya ee ka sareeya Neymar Jr.
Dhinaca kale Sandro Rosell ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay inuu la soo saxiixan doono xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr, haddii ay dhacdo inuu markale la wareego mas’uuliyada madaxtinimo ee kooxda Barcelona.
Neymar Jr, oo 28 jir ah, ayaa ka tagay Barcelona xagaagii 2017, si uu ugu biiro kooxda Paris Saint-Germain, wuxuuna ku dhaqaaqay qiimo dhan 222 million euros.
Magaca Neymar Jr ayaa lala xiriirinayay xagaagii hore iyo ilaa haatan inuu markale ku laaban doono kooxda Barcelona, wuxuuna isku dayayaa inuu ku qanciyo maamulka PSG inay u ogolaadaan inuu baxo.
Haddaba Sandro Rosell oo la hadlayay “Radio Marca” ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan isku dayi lahaa inaan mar kale la soo saxiixdo Neymar Jr, haddii aan ahaan lahaa madaxweynaha haatan ee kooxda Barcelona”.
“Waa ciyaaryahanka labaad ee ugu wanaagsan adduunka kaddib Lionel Messi, wuuna ku habboon yahay falsafadda kooxda”.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska Neymar Jr uu ku joogayo kooxda Paris Saint-Germain inuu dhacayo xagaaga 2022.Gool FM.
Xilliga dib loo bilaabayo Premier...
Thursday, May 28, 2020 - 19:26
(England) 28 Maajo 2020. Shuraakada Premier League ayaa maanta isku raacay in dib loo bilaabo xilli ciyaareedka horyaalka 2019/2020 maalin Arbaco ah 17-ka bisha June.
Xilligaas waxaa la ciyaari doonaa labo kulan oo horey ugu baaqday sababa la xiriira fiinaalkii Carabao Cup, Aston Villa ayaa wajaheysa Sheffield United, halka Manchester City ay soo dhaweyn doonto Arsenal, waxayna labadaas kulan dhici doonaa 17-ka bisha June, intaas kaddibna kulamada horyaalka ayaa toos u bilaaban doono Jimco 19 June.
Sababa la xiriira COVID-19, kulamada waxaa la dheeli doonaa iyadoo albaabada ay u xiran yihiin oo bilaa taageero ah.
Shuraakada Premier League ayaa sidoo kale isku raacay in dhamaan 92 kulan ee dhiman ay si toos ah u baahiyaan taleefishanada ee xuquuqda baahinta iska leh sida Sky Sports, BT Sport, BBC Sport iyo Amazon Prime.Saacadaha laga baasan doono Ingiriiska kulamada:Kulamada la ciyaari doono ayaa waxay soo gali doonaan xilliyadan:
Sabti: 12:30, 15:00, 17:30 iyo 20:00
Maalmaha Taalaadada, Arbacada iyo Khamiista kulamada waxay soo gali doonaan 18:00 iyo 20:00.Gool FM.
Vinicius Jr oo u hanjabay kooxda...
Thursday, May 28, 2020 - 18:24
“Waa inaan ku dhameysanaa xilli ciyaareedka inagoo ah kooxda heysata horyaalka La Liga, si aan farxad uga dareeno wajiyada taageerayaasheena, kaddib dhibaatada haatan jirta, waxaan dooneynaa inaan dib ugu laabano oo aan mar kale u ciyaarno taageerayaasha dartood”.Gool FM.
Kylian Mbappé oo si weyn u ammaanay...
Thursday, May 28, 2020 - 12:36
(Paris) 28 Maajo 2020. Weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé ayaa sheegay in Zinedine Zidane iyo Cristiano Ronaldo inuu ku dayan jiray tan iyo markii uu yaraa.
Kylian Mbappé ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Cristiano Ronaldo iyo Zinedine Zidane waa awoodeyda, waxay taariikh kaga tageen kubadda cagta, waana waxaan doonayo inaan gaaro”.
Kylian Mbappé oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu si weyn u amaanay kooxda Liverpool uu hoggaaminayo tababare Jürgen Klopp, wuxuuna yiri:
“Aad ayaan ugu qanacsanahay waxa ay kooxda Liverpool soo bandhigtay, waxaana mahad celintaas leh Jürgen Klopp”.
“Waa wax naadir ah xilli ciyaareedkan, Liverpool waxay aheyd aalada horyaalka Premier League”.
“Waxay guusha ka dhigeen mid fudud, laakiin runtu waxay tahay inaysan marna fududeen”.Gool FM.
Kooxda Arsenal oo Napoli kula...
(Yurub) 28 Maajo 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo warinayaa inay weli naadiga Napoli kula dagaalamysa saxiixa daafaca Lille ee Magalhaes.
Napoli waa ay dhankeeda sii waddaa tartanka ay ku wajahayso Arsenal oo ay ku rabto inay kaga adkaato saxiixa daafaca Lille ee Gabriel Magalhaes, sida ay sheegayaan wararka laga helayo Faransiiska.
The Partenopei kooxda lagu naanayso ayaa la soo ifbaxday maalmihii la soo dhaafay inay sida ugu cadcad ugu jirto tartanka loogu jiro daafacan dhexe ee reer Brazil, kaasoo 22-sano jir ah.
Si kastaba ha noqotee, Warsidaha Le10sport ayaa warinaya in Arsenal ay wali ku jirto socodsiinta iyo isha ku heynta xaaladda xiddigan.
Qiimaha lagu weydiisanayo Gabriel waa 30 milyan oo euro, halka Napoli ay u arki laheyd inuu yahay dhaxal ku habboon Kalidou Koulibaly.
Waxa uu ku biiray Lille bishii Janaayo ee sanadkii 2017-kii, inkastoo uu amaah ku qaatay Kooxaha Troyes iyo Dinamo Zagreb.
Gabriel ayaa u saftay kooxda Lille 34 kulan xilli ciyaareedkan, isagoo u dhaliyay hal gool.Gool FM.
Real Madrid oo Afar ciyaaryahan u...
Thursday, May 28, 2020 - 09:35
Laacibka khadka dhexe ee wax weerara, Vazquez ayaa ka soo baxay akadeemiga Madrid, halka Diaz laga soo iibsaday Manchester City bishii Janaayo ee la soo dhaafay.Gool FM.